कुश्मा नगरपालिका ९ को वडा कार्यालयको शिलान्यास गर्दै नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी लगायत
माघ ५, पर्वत । स्थापना कालदेखि नै कुश्मा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन भाडाको घरमा छ । फलेवास नगरपालिकाले सिँचाइ कार्यालयको साँघुरो भवनमा कार्यालय चलाएको छ ।
जलजला गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकाको भवन पनि भाडाकै घरमा छ । महाशिला गाउँपालिका साविकको बालाकोट गाविसको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । बिहादी गाउँपालिकाले गत वर्ष प्रशासनिक भवन बनाएर कार्यालय चलाएपनि भवन निर्माणको काम पूरा भएको छैन ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन भाडामा रहेका छन् । तर, वडा कार्यालयका भने नयाँ नयाँ भवन बन्न थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष बिहादी गाउँपालिकाको वडा न. २, ४ र ६ को निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालका अनुसार वडा नम्बर १ को भवन बनाउन बजेट विनियोजन भइसकेको हुनाले जग्गा व्यवस्थापन हुँदैछ । वडा नम्बर ३ र ५ को अघिल्लो वर्ष निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष बनाएको प्रशासनिक भवनलाई विषयगत शाखा व्यवस्थापन गरी चालू आर्थिक वर्ष ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी १६ कोठाको २ तले नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न थालेको भुसालले बताए ।
जिल्लाको मोदी गाउँपालिकामा गतवर्ष वडा नम्बर ६, ३ र ४ को वडा भवन निर्माण भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष वडा नं २ र ७ को वडा भवन बनाउन टेण्डर आव्हान गरिएको छ ।
मोदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, ८ र ५ को अर्को आर्थिक वर्ष निर्माण गर्ने योजना रहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत किसानवहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन समेत निर्माणको चरणमा रहेको छ । प्रशासनिक भवनको ६ कोठा सम्पन्न भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रीले बताए ।
कुश्मा नगरपालिकाका वडा नम्बर ९, १२ र १३ को भवन बनाउन थालिएको छ । अर्को वर्ष वडा नम्बर १, ३, ७ र ११ को भवन बनाउने योजना रहेको छ । कुश्मा नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरी पंगेनीले प्रसासनिक भवन बनाउन डिपिआर तयार गरि पूर्वाधार विकास विभागमा समपुरक योजनामा समावेश गर्न सिफारिस गरिएको बताए । फलेवास नगरपालिकामा चालू आर्थिक वर्ष वडा नम्बर २, ९, १० र ११ को वडा भवन बन्ने चरणमा छन् । गतवर्ष वडा नं. ४ र ६ को भवन निर्माण गरिएको थियो । फलेवास नगरपालिकाको स्थायी केन्द्र तोकिएको हुनाले प्रशासनिक भवन पनि निर्माणको प्रक्रियामा रहेको नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले जानकारी दिए ।
जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माका अनुसार ९ ओटा वडा मध्ये ३ ओटा वडाको भवन निर्माण गर्ने तयारी छ । वडा नम्बर ८ को वडा भवन निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन गरी लालपूर्जा प्राप्तिको अन्तिम चरणमा रहेको छ । वडा नम्बर ४ को भवन फड्केढुंगा आधारभूत विद्यालयलाई प्रतिस्थापन गरी सञ्चालन गरिएको छ । वडा नम्बर २ को भवन बनाउन जग्गा खोजी भइरहेको शर्माले बताए ।
पैयुँ गाउँपालिकाले प्रसासनिक भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ७ करोड बजेट लाग्ने अनुमान सहित डिपिआर तयार भएको छ ।
वडा नम्बर ४ र ७ को भवन निर्माणका लागि हालै ठेक्का लगाइएको पौडेलले बताए । पैयुँ गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ५ को पर्खाल मर्मत सम्भार हुँदैछ । महाशिला गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्ष वडा नम्बर ४ र ५ को भवन बनाउन प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता जीवन उचै ठकुरीले जानकारी दिए । स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ घरभाडामा खर्चिँदै आएका छन् ।
गाउँमै मोटर पुगेपछि नाचगान र खुशियाली[२०७७ फागुन, १८]
बाबियाचौर र लभ्लीहिलमा हरियाली पार्क निर्माण[२०७७ फागुन, १८]
सरकारी वेवास्ताका कारण जंगलमै अलपत्र बन्यो म्याग्दीको स्लेट खानी[२०७७ फागुन, १८]
पर्वतका ग्रामीण सडकमा धमाधम पुल निर्माण[२०७७ फागुन, १८]
मनाङमा ३३ केभीको प्रसारण लाइन[२०७७ फागुन, १८]